တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: နှစ်ကူးလက်ဆောင် ...
မနေ့က အီးမေးလ်စစ်တော့ ကျမအတွက် နှစ်သစ်ကူး လက်ဆောင်ဆိုပြီး ကဗျာလေးတွေ ရောက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ တပုဒ်က ၁၄ ရက်နေ့ညက၊ နောက်တပုဒ်ကတော့ ၁၅ ရက်နေ့ နေ့လည်က ပို့ထားတာပါ။ ဒီလက်ဆောင် ကဗျာလေးတွေကို ဖတ်ပြီး ကျမ အလွန်ပဲ ၀မ်းသာ ပျော်ရွှင် မိပါတယ်။ ကဗျာတွေကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ကျမဟာ ... ပစ္စည်းလက်ဆောင်ထက် ကျမအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးပို့ပေးတဲ့ ကဗျာလက်ဆောင်ကို ပိုပြီး တန်ဖိုးထား နှစ်သက်မိလို့ပါပဲ။ ကျမ နှစ်သက်တဲ့ ကဗျာလေးတွေကို ကျမအတွက် နှစ်ကူးလက်ဆောင် အဖြစ် ပေးပို့သူ ဆရာ နှစ်ဦးလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်။
ကျမရတဲ့ လက်ဆောင်ကဗျာလေး ၂-ပုဒ်ကို အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဘလော့မှာ တင်လိုက်ပါတယ်။
ဆရာတဦးကတော့ သူ့အမည်ကို မဖော်ပြပါနဲ့လို့ တောင်းဆို ထားတဲ့အတွက် ... အမည်ကို ချန်လှပ်ထားရတာ နားလည်ပေးကြပါလို့ ... ။
မှုန်းချယ် သ-ခွင့် မသာပြီ။
နီးဖို့အားအင် ဖြစ်မည်တကား ...
ဒါကတော့ အမည် မဖော်လိုသူ ဆရာရဲ့ စာပါ။
ရတုပိုဒ်စုံ ကဗျာကို ဒီနေ့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒီလို ရတုကဗျာတွေ၊ အတွေးအရေးတွေ မဖတ်ဖြစ်တာ အတော်ကြာခဲ့ပြီ။ အမှတ်မထင် ဖတ်လိုက်ရတော့ အရသာတမျိုး ပြန်ခံစားရလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီလို အလွမ်းဘွဲ့တွေကို ရှေးစာဆိုတွေက မယ်ဘွဲ့မောင်ဘွဲ့ ရေးတတ်ကြတာကို သတိရမိတယ်။ စာဆို တယောက်တည်းကပဲ နှစ်မျိုး ရေးတတ်သလို၊ စာဆိုတယောက်စီက အခံအလိုက် ရေးကြတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ ဒါက မြန်မာစာပေရဲ့ `အလှတပါး´ လို့ ပြောရင်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း သင်္ကြန်အလွမ်းပြေ အဖြစ် မမေဓာဝီရဲ့ မယ်ဘွဲ့ရတု အတွက် မောင်ဘွဲ့ `အလိုက်ရတု´တပုဒ် ရေးလိုက်တယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
နက်ဖန်ဆိုရင် မြန်မာနှစ် တနှစ်ဆန်းပြန်ပြီပေါ့ ... ။
ကျမရတဲ့ လက်ဆောင် ကဗျာလေး ၂-ပုဒ်နဲ့ ကျမဘလော့ကို ခဏ နှုတ်ဆက်ရပါဦးမယ်။ အခြေအနေပေးတဲ့အခါ ကျမ ပြန်လာပါမယ်။ ဘယ်တော့လဲ ဆိုတာတော့ လောလောဆယ် မသိသေးပါဘူး။
ကျမဘလော့ကို ချစ်ခင်စွာ ဖတ်ရှုကြသူများ အားလုံး မြန်မာနှစ်သစ်အကူးမှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာ ကြပါစေလို့ ... ဆုတောင်းရင်း နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
၁၆၊ ဧပြီ၊ ၂၀၀၈
Posted by မေဓာဝီ at 12:00 PM
Labels: စိတ်ကြိုက်ကဗျာ, သင်္ကြန်, အခါကြီးရက်ကြီး
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
4/16/2008 5:01 PM
This is U Kyaw Myint from Vancouver. Hi May Dawee, are you the same person I visited you in Yangon. I try to look for you during my visit to Myanmar last year but in vain. They said that you are visiting UK.
4/16/2008 5:38 PM
4/17/2008 2:33 AM
၂၀၀၈ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ
မေရေ...ကဗျာလက်ဆောင်လေးတွေက မေမြတ်နိုးလဲမြတ်နိုးစရာ။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အားကျလေးစားစရာပါ။ ခဏနှူတ်ဆက်ပြန်ပြီလားကွယ်။ postအသစ်လေးတွေကို လာလာရှာမယ်နော်။ နှစ်သစ်မှာ ကြည်လင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
4/18/2008 2:17 AM
4/20/2008 11:36 PM
အလွမ်းသင်္ကြန် ... ပန်းသင်္ကြန် ...
ဒီအချိန်ဆို ... (၂)
နွေဦးနှင်း နဲ့ စနိုးလေဒီ